ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးကဲနိုင်မယ့် ပွဲ(၃)ပွဲ - For her Myanmar
ပျော်ရကဲရမှ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်
ယောင်းတို့ရေ…ပိတ်ရက်ဆိုရင် ဘော်ဒါတွေနဲ့လည်းကဲချင် ဘယ်သွားရမှန်းလဲမသိ ဖြစ်နေတယ်မလား ? စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့တော့ … ယောင်းတို့ ရှာရဖွေရသက်သာအောင် Stella က ဒီတစ်ပတ်အတွက် ပျော်စရာပွဲလေးတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါပြီနော်။
နေ့ရက် : ၂၃.၃.၂၀၁၉ (စနေနေ့)
အချိန် : ညနေ (၄) နာရီမှ ည (၁၀) နာရီထိ
နေရာ : Level 2
ဒါကတော့ အိမ်မပိုင်လို့ ညဘက်အပြင်ထွက်လို့မရတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေအတွက်ပါ။ Yangon International Hotel ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ Level2ကလပ်ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ဘက်လုပ်မယ့်ပွဲလေးပါ။ ဝင်ကြေးကတော့ မကြာခင်ကြေညာမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ကလပ်သွားချင်ပေမဲ့ ညဘက်လည်းထွက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ဒီပွဲလေးကို သတိရလိုက်နော်။
ပွဲအကြောင်း ဒီထက်ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ခ် မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Related article>>>အတုယူလေးစားစရာ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး CEO (၅) ဦး
အချိန် : ညနေ (၅) နာရီမှ ည (၁၀) နာရီထိ
နေရာ : သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park
ဂီတပွဲတော်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဂီတအမျိုးအစားအစုံအလင်နဲ့ ယောင်းတို့ ကဲလို့ရအောင် Tuborg က စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ပါဝင်ဖျော်ဖြေမယ့်သူတွေကတော့ လင်းလင်း၊ ဝေလ၊ သာဒီးလူ၊ IDIOTS၊ ချမ်းချမ်း၊ နဲ့ နီနီခင်ဇော် စတဲ့နာမည်ကျော်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲလက်မှတ်တွေကို ၁၅၀၀၀ ကျပ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါနော်။
Related article>>>ရာသီလာချိန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ၄ ချက်ကို သိကိုသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နေ့ရက် : ၂၄.၃.၂၀၁၉ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် : ညနေ (၄) နာရီမှ ည (၇) နာရီထိ
နေရာ : LOTTE Hotels & Serviced Apartmarts Yangon
ဒါကတော့ သားသားမီးမီးတွေရှိတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်ပါ။ ကလေးတွေလည်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးရေကစားလို့ရတယ်၊ မေမေတွေလည်း အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရတယ်။ ဒေါ်လာ (၅၀) တန် လက်မှတ်တစ်စောင်ကို လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အသက် (၇) နှစ်ကနေ (၁၃) နှစ်ကြား ကလေးတစ်ယောက် ဝင်လို့ရတဲ့အပြင် အစားအသောက်ကူပွန်တွေပါဦးမှာပါ။
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီပိတ်ရက်မှာ အကဲချည်းပဲတစ်လိုင်းလုပ်ဖို့ သွားစရာပွဲတွေကို သိလောက်ပြီပေါ့နော်။ ဘယ်ပွဲတွေ သွားဖြစ်လဲဆိုတာ Stella ကိုလည်း ပြောပေးခဲ့ကြပါဦး။
ပြျောရကဲရမှ စိတျဝငျစားပါတယျဆိုတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ
ယောငျးတို့ရေ…ပိတျရကျဆိုရငျ ဘျောဒါတှနေဲ့လညျးကဲခငျြ ဘယျသှားရမှနျးလဲမသိ ဖွဈနတေယျမလား ? စိတျညဈမနပေါနဲ့တော့ … ယောငျးတို့ ရှာရဖှရေသကျသာအောငျ Stella က ဒီတဈပတျအတှကျ ပြျောစရာပှဲလေးတှကေို စုစညျးပေးလိုကျပါပွီနျော။
နရေ့ကျ : ၂၃.၃.၂၀၁၉ (စနနေေ့)
အခြိနျ : ညနေ (၄) နာရီမှ ည (၁၀) နာရီထိ
နရော : Level 2
ဒါကတော့ အိမျမပိုငျလို့ ညဘကျအပွငျထှကျလို့မရတဲ့ ယောငျးယောငျးတှအေတှကျပါ။ Yangon International Hotel ဝငျးထဲမှာရှိတဲ့ Level2ကလပျရဲ့ ပထမဆုံးနဘေ့ကျလုပျမယျ့ပှဲလေးပါ။ ဝငျကွေးကတော့ မကွာခငျကွညောမယျလို့ ပွောထားပါတယျ။ ကလပျသှားခငျြပမေဲ့ ညဘကျလညျးထှကျလို့မရဘူးဆိုရငျတော့ ဒီပှဲလေးကို သတိရလိုကျနျော။
ပှဲအကွောငျး ဒီထကျပိုသိခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီလငျ့ချမှာ ကွညျ့လို့ရပါတယျ။
Related article>>>အတုယူလေးစားစရာ ကမ်ဘာ့အအောငျမွငျဆုံး အမြိုးသမီး CEO (၅) ဦး
အခြိနျ : ညနေ (၅) နာရီမှ ည (၁၀) နာရီထိ
နရော : သုဝဏ်ဏဘူမိ Event Park
ဂီတပှဲတျောဆိုတဲ့အတိုငျး ဂီတအမြိုးအစားအစုံအလငျနဲ့ ယောငျးတို့ ကဲလို့ရအောငျ Tuborg က စီစဉျပေးထားတာပါ။ ပါဝငျဖြျောဖွမေယျ့သူတှကေတော့ လငျးလငျး၊ ဝလေ၊ သာဒီးလူ၊ IDIOTS၊ ခမျြးခမျြး၊ နဲ့ နီနီခငျဇျော စတဲ့နာမညျကြျောတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ပှဲလကျမှတျတှကေို ၁၅၀၀၀ ကပျြနဲ့ သတျမှတျထားပါတယျ
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျကို ကွညျ့ခငျြရငျတော့ ဒီလငျ့ချကိုနှိပျပါနျော။
Related article>>>ရာသီလာခြိနျမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ ဒီ ၄ ခကျြကို သိကိုသိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
နရေ့ကျ : ၂၄.၃.၂၀၁၉ (တနင်ျဂနှနေေ့)
အခြိနျ : ညနေ (၄) နာရီမှ ည (၇) နာရီထိ
နရော : LOTTE Hotels & Serviced Apartmarts Yangon
ဒါကတော့ သားသားမီးမီးတှရှေိတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျပါ။ ကလေးတှလေညျး နှရောသီကြောငျးပိတျရကျမှာ ပြျောပြျောပါးပါးရကေစားလို့ရတယျ၊ မမေတှေလေညျး အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရတယျ။ ဒျေါလာ (၅၀) တနျ လကျမှတျတဈစောငျကို လူကွီးတဈယောကျနဲ့ အသကျ (၇) နှဈကနေ (၁၃) နှဈကွား ကလေးတဈယောကျ ဝငျလို့ရတဲ့အပွငျ အစားအသောကျကူပှနျတှပေါဦးမှာပါ။
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ဒီပိတျရကျမှာ အကဲခညျြးပဲတဈလိုငျးလုပျဖို့ သှားစရာပှဲတှကေို သိလောကျပွီပေါ့နျော။ ဘယျပှဲတှေ သှားဖွဈလဲဆိုတာ Stella ကိုလညျး ပွောပေးခဲ့ကွပါဦး။
Tags: #weekend, Event, Family, festival, friends, Fun, Plan